Orange iyo Vodafone ayaa xaqiijinaya qorshayaasha lagu dalbanayo rukhsadaha Isgaadhsiinta Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Orange iyo Vodafone ayaa xaqiijinaya qorshayaasha lagu dalbanayo rukhsadaha Isgaadhsiinta Itoobiya
Labada shirkadood ee Orange iyo Vodafone labaduba waxay u xaqiijiyeen wargeyska Capacity inay qorsheynayaan inay ku dalbadaan shatiyada isgaarsiinta Ethiopia ugu dambeyn waqtiga loo kordhiyay oo ah 5 April.
Horraantii toddobaadkan Madaxa guud ee shirkadda Airtel Africa wuxuu sheegay in shirkaddan oo laga leeyahay dalka Hindiya aysan dalabayn doonin, laakiin isla waqtigaas shirkad Shiinaha laga leeyahay oo aad loo yaqaan, Sharing Mobile, ayaa sheegtay.
Maamulka Isgaarsiinta Itoobiya (ECA) ayaa todobaadkan kordhiyay waqtiga loo qabtay jawaab celinta codsigooda soo jeedinta (RFPs) laga bilaabo 5 Maarso ilaa 5ta Abriil. Laakiin illaa iyo hadda ECA ma aysan dejin jadwal si dhab ah loo codsado dalabyada labada shati ee la bixiyo – ama dejinta shuruudaha maaliyadeed iyo farsamo.
ECA waxay ku tiri qoraal ay soo dhigtay barteeda twitter-ka: “Codsiga ka yimid tartamayaasha inta lagu gudajiray su’aasha iyo jawaabta RFP ee labada liisanka isgaarsiinta dalka oo dhan, ECA waxay jeceshahay inay ku dhawaaqdo in taariikhda soo gudbinta dalabka ee RFP la hagaajiyay.”
Afhayeen uhadlay Orange ayaa usheegay wargeyska Capacity usbuucan: “Waxaan si buuxda ugu howlannahay howsha socota ee ah furitaanka suuqa isgaarsiinta ee Itoobiya.”
Orange waxay si rasmi ah u muujisay xiisaheeda Juun 2020 iyadoo ka jawaabeysa ECA. “Afrika waa qayb muhiim ah oo ka mid ah istiraatiijiyadda kobaca kooxda sidaa darteed waxaan aaminsanahay in Orange uu u keeni karo qiimo dheeri ah shacabka Itoobiya qiimo tayo sare leh, xawaare sare leh, dijitaal ah, adeegyo badan oo aan u maleyneyno inuu awood u siinayo marinka ugu ballaaran dhanka internetka iyo horumarinta adeegyada ganacsiga iyo qeybaha bulshada ee Itoobiya, ”ayuu yiri sarkaalka.
“Waxaan leenahay koox heegan ah oo ka shaqeyneysa soo jeedintan waxaana xafiis ka furney Addis Ababa si ay noogu fududeyso isweydaarsiga aan la leenahay mas’uuliyiinta iyo kuwa aan la kaashan karno.”
Isla mar ahaantaana, Vodafone ayaa sidoo kale xaqiijisay inay siisay calaamadda xiisaha maamulka Itoobiya. Fursaddu wey weyn tahay. Ma jiraan meelo badan oo adduunka ah oo wali u baahan in la xoreeyo isgaarsiinta. ”
Itoobiya waxay leedahay hal shirkad oo dowladeed, Ethio Telecom, oo u adeegta dad gaaraya 112 milyan. Dawladdu waxay siisay ogeysiis inay qorsheyneyso inay iibiso saamiga 45%, Ethio Telecom waxay qortay KPMG si ay ugala taliyaan qiimeynta.
Sarkaal ka tirsan Vodafone ayaa u sheegay wargeyska Capacity faraceeda Kenya ee Safaricom “inuu noqon doono hogaamiyaha hogaamiyaha” dalabka Ethiopia, isagoo la shaqeynaya saamilayda ugu weyn, Vodacom ee South Africa. Vodafone waa saamileyda ugu weyn ee Vodacom.
Taageerada teknoolojiyadda ayaa ka imaan doonta Sumitomo, oo ah shirkad laga leeyahay Japan oo ka shaqeynaysay Myanmar iyada oo ay la shaqeyneyso KDDI iyo shirkadda dowladdu leedahay ee MPT.
Codsiga qoyska ee Vodafone waxaa lagu taageeri doonaa $ 500 milyan oo deyn ah oo ka socota Dowladda Mareykanka ee Horumarinta Maalgelinta Hay’adda (IFC), oo fadhigeedu yahay Washington DC, iyo shirkadda ay leedahay dowladda UK ee CDC Group, oo aan weli shaacin tirada taageeradeeda. . Taageerada dowladaha Mareykanka iyo UK ayaa la filayaa inay ka dhigan tahay in Huawei laga reebi doono dalabka qandaraaska sahayda.
Mid ka mid ah hawl wadeenada Vodafone ayaa u sheegay wargeyska Capacity in taageerada ka timaadda hay’adaha horumarinta caalamiga ahi ay tahay “taageero weyn oo ku aaddan qaabkeenna – waxaa jira suurta galnimada suuqa”.
Laakiin Vodafone ayaa ka digtay, in kasta oo ay ka go’an tahay inay dalbato shatiga Itoobiya, “way adag tahay maadaama aynaan haysan shuruudihii ugu dambeeyay ee xaraashka. Waxaan si taxaddar leh u qaadannaa fursad kasta oo maalgashi. Vodafone ma maal gasho ilaa ay jirto kiis ganacsi oo wanaagsan. “
Mid ka mid ah maamulayaasha Orange, oo la hadlaya wargeyska Capacity iyadoo aan la shaacin magaciisa, ayaa sheegay in shirkaddu ay “wali sugeyso faahfaahinta ugu dambeysa ee qaabdhismeedka sharciyeynta”. Qofka ayaa intaas ku daray: “Dhanka kale, waxaan nahay feejignaan waxaana si dhow ula soconaa xaalada inta lagu gudajiro wajiyadaha soo socda ee geedi socodka si loo hubiyo inay wanaagsantahay oo ay u ogolaato fursad dhaqaale oo ku filan isdhexgalka dadka cusub.”
Laakiin wargeyska Capacity ayaa loo sheegay in Orange laga yaabo inuu dalbado qeyb ka mid ah Ethio Telecom. Shirkadda Faransiiska ah waxay qandaraas laba sano ah oo maamul ah ku haysatay shirkadda keligeed maamusha ee Itoobiya, laakiin taasi waxay dhacday dhammaadkii 2012. Sikastaba Orange waxaa laga yaabaa inay hayso macluumaad ku filan oo ku saabsan shirkadda si ay ugu oggolaato inay sare u qaado dalab macquul ah oo ah saamiga 45%.
Previous articleMareykanka oo ka codsadey Ereteriya iney si degdeg ah uga saarto Gobalka Tigreyga
Next articleNuxurkii khudbadii madaxweynaha DFS farmaajo
Mareykanka oo beeniyey inuu sameeyey Ficil burcadnimo oo casri ah
Diyaarad drone oo ku dhacdey deegaan ka tirsan Hiiraan